အမေရိကန် 100 နှစ်ပေါင်းများစွာလူမီနီယံကုမ္ပဏီအရှုပ်တော်ပုံ!နီးပါး 20 ဒေတာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း, NASA ဂြိုဟ်တု ၂ လုံးသည်၎င်းကြောင့်ပျက်ကျခဲ့သည် | YK လူမီနီယမ်
အမေရိကန် 100 နှစ်ပေါင်းများစွာလူမီနီယံကုမ္ပဏီအရှုပ်တော်ပုံ!နီးပါး 20 ဒေတာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း, NASA ဂြိုဟ်တု ၂ လုံးသည်၎င်းကြောင့်ပျက်ကျခဲ့သည်
ယူအက်စ်. -အခြေပြုသတ္တုထုတ်လုပ်သူသည်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုအတုပြုလုပ်ပြီး NASA အားနှစ် ၂၀ ကာလအတွင်းချွတ်ယွင်းသောပစ္စည်းများပေးခဲ့သည်, နှစ်ခုပျက်ကွက်ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်မှုနှင့်ပိုပြီးရရှိလာတဲ့ $700 ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသန်း, according toarecent NASA investigation.
According to bloomberg, နာဆာသည် Portland ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုအားစွပ်စွဲနေသည်, သတ္တုရိုင်း။, Sapa Profiles Inc မှခေါ်တော်မူ. (SPI) of falsifying thousands of aluminum component certifications obtained overa19-year period by hundreds of customers, including NASA.
Now, SPI’s parent company, norsk hydro, has agreed to pay $46 million in fines to NASA, အမေရိကန်. department of defense and other agencies over the incident.
ဖြည့်စွက်ကာ, in order to solve the occurred during the period of 1996-2015 and fraud related criminal charges and civil claim, SPI also confiscated company has signedacontract with the us government contractor to bring the profits of $1.8 million,atest lab director of SPI also acknowledged the relevant charges, currently serving, also was ordered to pay $170000 in compensation.
The defective parts were used in the construction of NASA’s Taurus XL rocket, which was used in missions from 2009 ရန် 2011 to launch satellites to study earth’s climate.
Jim Norman, NASA launch services director, ဟုပြောသည်:
importantly, we trust our American manufacturing colleagues to produce, စမ်းသပ်မှု, and certify materials to the standards we require.
ယူအက်စ်. attorney Zachary twiliger for the eastern district of Virginia also wrote: “norsk hydro subsequently provided false test results to hundreds of customers throughout the United States, all in an effort to increase corporate profits and obtain production-based bonuses.”
But over the past 20 နှစ်များ, this company’s greed has violated that trust.”
The company has been established for more than 110 နှစ်များ
ဖြည့်စွက်ကာ, Sapa Profiles, nowasubsidiary of hydro Portland, also pleaded guilty to one count of mail fraud and was barred from future contracts with the U.S. federal government.
ဖေဖော်ဝါရီ 12, 2021 မှာ 7:11 နံနက်
မတ် 06, 2021 မှာ 12:59 နံနက်
tadalafil ဝယ်ပါ မင်္ဂလာပါ 60 ရောင်းရန်မီလီဂရမ်
tadalafil အွန်လိုင်း 20
မတ် 06, 2021 မှာ 4:14 နံနက်
tadalafil ကဘာလဲ 40 mg tadalafil
မင်္ဂလာပါ 60 ရောင်းရန်မီလီဂရမ်
မတ် 08, 2021 မှာ 8:06 ည
ယူအက်စ်အေမှပြည်ပဆေးဆိုင်များတင်ပို့ india ဆေးဆိုင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ
USA ဆေးဆိုင်အိန္ဒိယ ယေဘုယျဆေးပြား
မတ် 09, 2021 မှာ 8:37 ည
sildenafil ဆရာဝန်ဆေးညွှန်းမပါဘဲ: https://genericwdp.com/ ယူအက်စ်အေမှပြည်ပဆေးဆိုင်များတင်ပို့
မတ် 11, 2021 မှာ 8:46 ည
ဆေးလုံးနှုန်း Viagra Viagra Viagra 100mg စျေးနှုန်း
မတ် 12, 2021 မှာ 7:11 ည
Viagra ဘယ်လောက်လဲ ကောင်တာ Viagra ကျော်အကောင်းဆုံး
ဆရာဝန်တစ် ဦး ဆေးညွှန်းမပါဘဲ Viagra
မတ် 13, 2021 မှာ 5:51 ည
Viagra လျှော့စျေး အွန်လိုင်းအစစ်အမှန် Viagra ဝယ်ပါ
ယေဘူယျ Viagra ကိုအွန်လိုင်းဝယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးနေရာ
မတ် 13, 2021 မှာ 7:18 ည
မက္ကဆီကန် Viagra မက္ကဆီကန် Viagra
မတ် 14, 2021 မှာ 3:37 ည
Viagra ၏ကုန်ကျစရိတ် မက္ကဆီကန် Viagra
ဆရာဝန်တစ် ဦး ဆေးညွှန်းမပါဘဲ Viagra အွန်လိုင်းအစစ်အမှန် Viagra ဝယ်ပါ
မတ် 15, 2021 မှာ 2:04 ည
Viagra ဘယ်လောက်လဲ Viagra ယေဘုယျဖြစ်လိမ့်မည်
ငါကောင်တာကျော် Viagra Viagra ဝယ်နိုင်ဘယ်မှာ Viagra ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
ဇူလိုင် 26, 2021 မှာ 11:00 နံနက်
ကျောက်တံတား 200 mg ကနေဒါ
ယေဘုယျအားဖြင့် cialis tadalafil ၂၀ မီလီဂရမ်
ဇူလိုင် 31, 2021 မှာ 2:28 ည
သြဂုတ် 02, 2021 မှာ 6:04 ည
hydroxychloroquine 200 mg ကုန်ကျစရိတ်
သြဂုတ် 23, 2021 မှာ 5:29 ည
သြဂုတ် 25, 2021 မှာ 12:54 ည
ယေဘုယျအားဖြင့် cialis ၁၀ မီလီဂရမ် 30 ဆေးပြား
စက်တင်ဘာ 15, 2021 မှာ 9:29 ည
ivermectin စျေးနှုန်း ယူကေ
ivermectin စျေးနှုန်း usa
စက်တင်ဘာ 25, 2021 မှာ 3:20 ည
အောက်တိုဘာ 08, 2021 မှာ 11:00 ည